House Trano NIO） Ny Ivotoerana 24 Nio ao Harbin Changhong dia manome serivisy fananganana magazay an'ny NIO House ao Harbin. Amin'ny maha-ivon'ny nio voalohany amin'ny faritany avaratra atsinanana, ny NIO House dia miorina eo amin'ny mariky ny tanàna - Central Street. Mitarika tsara (“Lixiang” amin'ny teny sinoa) amin'ny 12 jona, changh ...
Changhong Exhibition Center fampisehoana voalohany
Tamin'ny 25 aprily, notontosaina tamim-pahombiazana tao amin'ny Centre Chibongong fampirantiana tao Changhong ny fifaninanana fanomezana ho an'ny China International Space Design Competition Hebei Division sy ny Fikambanan'ny Indostrian'ny haingon-trano momba ny firavaka Hebei 2019-2020. Tsy dia voninahitra be fotsiny ho an'i de ...
Ny komity mpikarakara ny valam-pandrosoana fampiroboroboana indostrialy voalohany sy ny Konferansa fanao isan-taona momba ny fampiroboroboana ny indostrialy sy fampiroboroboana ny fampiroboroboana ny fampiroboroboana ny fampiroboroboana sy fampiroboroboana ny fampiroboroboana ny lojika indostrialy dia natombok'ireo fikambanana indostrialy sy orinasa lehibe voasoratra mifanaraka amin'ny lalàna manerana ny ...
Hisokatra amin'ny SNIEC ny kintana faha-6C amin'ny 02 Sep 2020
140+ mpamatsy vahaolana an-tsokosoko avo lenta avy amin'ny sehatra dimy, ao anatin'izany ny fittings shop & fitaovana fivarotana, famolavolana magazay, varotra maso, teknolojia fivarotana antsinjarany, fitaovana fanaovan-jiro, fampitaovana sy kojakoja fandraisam-bahiny ary rafitra fampangatsiahana, mifaninana ary ...
EuroShop dia hatao ao amin'ny foiben'ny fampirantiana ao Dusseldorf, tanàna fahadimy lehibe indrindra any Alemana, manomboka ny 16 ka hatramin'ny 20 Febroary 2020. Ny fitaoman'i EuroShop eo amin'ny sehatry ny varotra no mitana ny laharana voalohany manerantany. Ny fampirantiana dia mizara ho efitrano fampirantiana 17 miaraka amin'ny faritra fampiratiana o ...
Tamin'ny volana septambra 2019, 27 taona i Chang Hong (CH).
Tamin'ny volana septambra 2019, 27 taona i Chang Hong (CH). Ho an'ny olona iray, ity vanim-potoana ity dia feno fahatanorana sy fahavelomana, miezaka hivoatra sy ho matotra. Ny fitomboan'ny CH dia tsy afa-misaraka amin'ny ezaka tsy voatanan'ny olona CH sy ny asa mafy ataony, ary ny olona CH dia vao mainka tsy misaraka amin'ny fanohanana ...